सुत्केरीको ज्यान बचाउन सेनाको सहयोग – Ramailo Sandesh
सुत्केरीको ज्यान बचाउन सेनाको सहयोग
काठमाडौ । पर्वतमा नेपाली सेनाले एक सुत्केरीको ज्यान बचाउन उद्दार गरेको छ । सुत्केरीपछि अत्यधिक र क्त श्रा वका कारण महिलाको ज्यान जोखिममा परेको थियो । वर्षाका कारण वाटो भत्किएर यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् । कुस्मा नगरपालिका–८ दोबिल्लाको सुन्दरे खोलामा आएको बाढीका कारण उनी अलपत्र परेकी थिइन् ।
सोही खोलामा आएको बाढीले गाडी समेत बगाएको थियो । मान्छे सहितको गाडी बगाएका कारण उनीहरुको पनि खोजी भइरहेकै बेला सुत्केरी महिला उपचारका नपाएर समस्यामा थिइन् । उक्त बाढीमा पनि नेपाली सेनाले भने आफैँलाई जोखिममा राखेर महिलालाई बाढीबाट तारेर थप उपचारको लागि पोखरा पठाएको छ।
जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–२ देउपुर घर भएकी २७ वर्षिया पार्वती गिरीलाई उपचारका लागि पोखरा पठाइएको हो । उनले गए राति साढे ११ बजे पर्वत अस्पतालमा छोरा जन्माएकी थिइन्। तर, सुत्केरी भएपछि उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या आयो ।
गए राति साढे १० बजेदेखि निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण सुन्दरे खोलामा आएको बाढीले इन्जिनियर र चालक रहेको गाडी नै बगाएको थियो । त्यसैले उनलाई सो खोला तारेर उपचारका लागि अस्पताल लैजाने अन्य उपाय थिएन । सेनाले जोखिम मोलेर उनलाई बोकेरै खोला तारेको हो ।
माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका यि ४ नेता किन गए प्रचण्ड विरुद्ध उजुरी दिन ?
माथिल्लो तामाकोशी विद्युत महँगो किन भयो ? के भन्छन् कुलमान घिसिङ ?